माइतमै थियो अवैध सम्बन्ध, जब बच्चा जन्मियो, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
माइतमै थियो अवैध सम्बन्ध, जब बच्चा जन्मियो
एजेन्सी । भारतको पञ्जाबस्थित मोगामा एक हैरान गर्ने लज्जास्पद घटना भएको छ । श्रीमानसँग छुट्टिएर अलग माइतमा बस्दै आएकी एक महिलाकोएक व्यक्तिसँग अवैध सम्बन्ध भयो ।
केही दिनपछि ती महिला गर्भवती भइन् । छोरीलाई जन्म दिइन् । तर महिला र उसका प्रेमीले छोरीलाई लिएर नालीमा फाले । सोही स्थानमा नवजात छोरीको मृत्यु भयो ।
यो लज्जास्पद घटना मोगा थाना बाघापुराना क्षेत्रको हो । माहाला कला गाउँकी २८ वर्षीया अमनदीप कौरको बिहे गिल ग्राम निवासी राजपालसँग भएको थियो । तर, बिहेको केही दिनपछि उनीहरुबीच झगडा हुन थाल्यो । दुबैबीच सम्बन्धमा समस्या आयो ।
यसपछि श्रीमतीले श्रीमानलाई छोडेर अलग बस्न थालिन् । ती महिला दुई वर्षदेखि आफ्नै माइतमै बस्दै आएकी थिइन् । यसैबीचमा सोही गाउँका जतिन्दर सिंह र ती महिलाबीच अवैध सम्बन्ध स्थापित भयो र छोरीसम्म जन्मि ।
उनीहरुबीच छोरा जन्मे पाल्ने सहमति भएको थियो । तर छोरी जन्मि । उनीहरुबीच यो छोरीलाई नपाल्ने सहमति बन्यो र नालीमा फाले ।
सूचनाका आधारमा प्रहरीले नवजात शिषुको शव फेला पार्यो । प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा अरोपी प्रेम जोडी फेला पर्यो । शव फेलापरेपछि बिना किटानी मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । तर, प्रहरीले दोषीलाई फेला पारेर गिरफ्तारसमेत गरेको छ ।
उनीहरुमाथि कानुनी कारबाही भइरहेको छ।